အဆီအဆိမ့်ကြိုက်တတ်သူတွေ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေ… – Trend.com.mm
လူတိုင်းလိုလို အဆီအအီ၊အချိုအဆိမ့်အစားအစာတွေကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။၀ိတ်တက်လာမှာစိုးလုိ့သာရှောင်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမရှောင်နိုင်ပဲစားမိသွားတာတွေရှိတယ်။ကိုလက်စထရောများတဲ့အစားအစာတွေစားမိသွားတဲ့အခါမှာ နောက်ဆက်တွဲသတိထားရမယ့်အရာလေးတွေကပ်ပါလာပါတယ်။အဆီအဆိမ့်များတဲ့အစားအစာတွေစားမိတဲ့အခါ ဒီအချက် ၅ချက်ကိုလည်းမဖြစ်မနေသိထားသင့်၊လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်တဲ့။ဘယ်လိုအချက်တွေလဲ?
အဆီများတဲ့အစားအစာ၊ညစာထမင်းစားသောက်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာ ကယ်လိုရီတွေပိုလျှံမနေအောင် ချေဖျက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအကြီးစားတွေလုပ်စရာမလိုပါဘူး။၁၅မိနစ်လောက်ဟိုနား ဒီနား လမ်းလေးထလျှောက်လိုက်တာမျိုးက ကယ်လိုရီတွေမပိုလျှံအောင်ချေဖျက်ပေးပါတယ်။
အဆီများတဲ့အစားအစာတွေစားထားပြီးရင် ရေနွေးအဖြူထည်တစ်ခွက်ဖြစ်စေ နှစ်ခွက်ဖြစ်စေ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ရေနွေးက အဆီမြန်မြန်ချေဖျက်နိုင်အောင်ကူညီပေးသလို အသည်း၊အစာအိမ်နဲ့အူတွေ ကိုသန့်ရှင်းကျန်းမာအောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ထမင်းစားသောက်ပြီး ၂နာရီ၊သုံးနာရီကြာမှ အိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းသင့်ပါတယ်။စားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလှဲလိုက်တဲ့အခါ အစာတွေလည်းကောင်းစွာမကြေညက်နိုင်ပဲဗိုက်မှာအဆီတွေသာစုသွားပါလိမ့်မယ်။
လူအများစုက ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါ ရေခဲရေသောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ရေခဲရေမသောက်သင့်ပါဘူး။ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ကိုလက်စထရောများပြားတဲ့အစားအစာတွေ၊အချိုဓာတ်ကဲတဲ့အစားအစာတွေစားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ရေခဲရေမသောက်ဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။အဆီအဆိမ့်များပြားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသောက်ပြီး ရေခဲရေသောက်တဲ့အခါ အသည်းကိုထိခိုက်စေတယ်လို့သိရပါတယ်။
အဆီများတဲ့အစားအစာတွေစားပြီးတဲ့နောက် ရေခဲမုန့်၊ဖာလူဒါ၊ရေခဲချောင်းစတဲ့ အေးတဲ့အစားအစာတွေမစားပါနဲ့။အဲ့ဒီလိုစားမိတဲ့အခါ အသည်း၊အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့် နေ့လည်စာ၊ညစာစားပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာ အချိုအအေးတွေမစားသင့်ပါဘူး။
ဒါတွေက အဆီအဆိမ့်များတဲ့အစားအစာတွေမရှောင်နိုင်ပဲစားမိတဲ့အခါ လုပ်သင့်တာ၊မလုပ်သင့်တာတွေပါ။ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားမယ်ဆိုရင် ၀ိတ်တက်မှာကိုလည်းရှောင်လို့ရသွားပြီပေါ့။
လူတိုငျးလိုလို အဆီအအီ၊အခြိုအဆိမျ့အစားအစာတှကွေိုကျနှဈသကျကွပါတယျ။၀ိတျတကျလာမှာစိုးလို့သာရှောငျရတာပါ။ဒါပမေဲ့ တဈခါတဈလမေရှောငျနိုငျပဲစားမိသှားတာတှရှေိတယျ။ကိုလကျစထရောမြားတဲ့အစားအစာတှစေားမိသှားတဲ့အခါမှာ နောကျဆကျတှဲသတိထားရမယျ့အရာလေးတှကေပျပါလာပါတယျ။အဆီအဆိမျ့မြားတဲ့အစားအစာတှစေားမိတဲ့အခါ ဒီအခကျြ ၅ခကျြကိုလညျးမဖွဈမနသေိထားသငျ့၊လုပျပေးသငျ့ပါတယျတဲ့။ဘယျလိုအခကျြတှလေဲ?
အဆီမြားတဲ့အစားအစာ၊ညစာထမငျးစားသောကျပွီးတဲ့အခါမြိုးမှာ ကယျလိုရီတှပေိုလြှံမနအေောငျ ခဖြေကျြပေးဖို့လိုပါတယျ။အဲ့ဒီအတှကျ လကေ့ငျြ့ခနျးအကွီးစားတှလေုပျစရာမလိုပါဘူး။၁၅မိနဈလောကျဟိုနား ဒီနား လမျးလေးထလြှောကျလိုကျတာမြိုးက ကယျလိုရီတှမေပိုလြှံအောငျခဖြေကျြပေးပါတယျ။
အဆီမြားတဲ့အစားအစာတှစေားထားပွီးရငျ ရနှေေးအဖွူထညျတဈခှကျဖွဈစေ နှဈခှကျဖွဈစေ သောကျပေးသငျ့ပါတယျ။ရနှေေးက အဆီမွနျမွနျခဖြေကျြနိုငျအောငျကူညီပေးသလို အသညျး၊အစာအိမျနဲ့အူတှေ ကိုသနျ့ရှငျးကနျြးမာအောငျ ကူညီထောကျပံ့ပေးပါတယျ။
ထမငျးစားသောကျပွီး ၂နာရီ၊သုံးနာရီကွာမှ အိပျရာထဲမှာလဲလြောငျးသငျ့ပါတယျ။စားပွီးတာနဲ့ခကျြခငျြးလှဲလိုကျတဲ့အခါ အစာတှလေညျးကောငျးစှာမကွညေကျနိုငျပဲဗိုကျမှာအဆီတှသောစုသှားပါလိမျ့မယျ။
လူအမြားစုက ထမငျးစားပွီးတဲ့အခါ ရခေဲရသေောကျတတျတဲ့အကငျြ့ရှိတတျပါတယျ။တကယျတော့ ရခေဲရမေသောကျသငျ့ပါဘူး။ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ ကိုလကျစထရောမြားပွားတဲ့အစားအစာတှေ၊အခြိုဓာတျကဲတဲ့အစားအစာတှစေားသောကျပွီးတဲ့အခါ ရခေဲရမေသောကျဖို့အကွံပေးထားပါတယျ။အဆီအဆိမျ့မြားပွားတဲ့အစားအစာတှကေိုစားသောကျပွီး ရခေဲရသေောကျတဲ့အခါ အသညျးကိုထိခိုကျစတေယျလို့သိရပါတယျ။
အဆီမြားတဲ့အစားအစာတှစေားပွီးတဲ့နောကျ ရခေဲမုနျ့၊ဖာလူဒါ၊ရခေဲခြောငျးစတဲ့ အေးတဲ့အစားအစာတှမေစားပါနဲ့။အဲ့ဒီလိုစားမိတဲ့အခါ အသညျး၊အစာအိမျနဲ့အူလမျးကွောငျးမှာ အနှောငျ့အယှကျဖွဈသှားစပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ နလေ့ညျစာ၊ညစာစားပွီးတဲ့အခါမြိုးမှာ အခြိုအအေးတှမေစားသငျ့ပါဘူး။
ဒါတှကေ အဆီအဆိမျ့မြားတဲ့အစားအစာတှမေရှောငျနိုငျပဲစားမိတဲ့အခါ လုပျသငျ့တာ၊မလုပျသငျ့တာတှပေါ။ဒီအခကျြလေးတှကေိုသိထားမယျဆိုရငျ ၀ိတျတကျမှာကိုလညျးရှောငျလို့ရသှားပွီပေါ့။
မညာနဲ့ …ငယ်ငယ်တုန်းက ဒါတွေတော့ လုပ်ခဲ့ဖူးကြတယ်မလား …